Fitsangatsanganana ankohonana | Seymour, IN | Ivon-toeran'ny mpitsidika an'i Jackson County
Enga anie 23, 2022 812.524.1914
Kitiho eto raha hijery ny zava-mitranga any amin'ny faritr'i Jackson amin'ity volana ity!
Manaraka ny zava-baovao ao amin'ny County Jackson.
Tsindrio eto raha hijery ny Fetibe & Hetsika.
Fetibe & Hetsika
Jereo ny hetsika manokana rehetra amin'ny fisafidianana daty amin'ny kalandrie na amin'ny fipihana ny bara mena ho an'ny lisitra feno.
Jereo ny zava-nitranga
manomboka ny traikefa nahafinaritra
Jackson County, NY
Miaraka amin'ny fanangonana be dia be ny toeram-pialam-boly an-kalamanjana sy ny hetsika ara-pianakaviana, ny mpitsidika dia afaka mahita karazana hetsika amin'ny alàlan'ny fifandraisana aminay ao amin'ny Jackson County Visitor Center. Manao dia mora amin'ny lalana rehetra izahay, adiny iray atsimon'i Indianapolis, adiny iray avaratr'i Louisville, KY, adiny iray avy any Cincinnati, OH, ary hitsambikina sy hitsambikina avy any Bloomington sy Nashville, Indiana. Raiso fotsiny ny Fivoahana 50 amin'ny Interstate 65 ary tongava mijery anay. Ny karazana hetsika sy fetiben'ny fianakavianay, dia ahafahanao mamorona fotoana tsy hay hadinoina. Mamporisika anao izahay mba hahatonga anay ho anao ho an'ny fampahalalana rehetra mety ilainao hanomanana ny dianao manaraka any Jackson County, Indiana. Tsindrio eto raha mila torolalana kely mankany Jackson County!
Ny tanànantsika kely
Niorina tamin'ny 1850, ity vondrom-piarahamonina kely ity dia mirehareha amin'ny lovany. Mipetraka amin'ny lalan'ny fanjakana 58 sy 135 ianao, afaka mandeha an-tongotra avy ao amin'ny Freetown-Pershing Museum, fonenan'ny harena maro ao anatin'izany ny iray amin'ireo bison 7 Jackson County, mankany amin'ny fivarotana gilasy na Sgt. Rick's American Cafe sy BBQ. Tsidiho ny ambanivohitra tsara tarehy mankany Fivarotana divay any Salt Creek ary manandrama manandrana ny divay azon'izy ireo, raha mijery fomba fijery mahafinaritra ianao.
Ity vondrom-piarahamonina ity dia mankalaza fa ny sezan'ny distrika sy ny trano misy tantara manankarena miaraka amin'ny trano fitsarana ny distrika no lohan'ny toerana manan-tantara rehetra manerana ny vondrom-piarahamonina sy ny manodidina azy. Faly ny vondron'olona monina ao an-trano amin'ilay nahazo loka Jackson County Fair. Brownstown dia mipetraka eo amin'ny US50, izay lalambe morontsiraka mankany amin'ny morontsiraka ary lalambe lehibe mankany atsinanana sy andrefana. Raha mipetraka eny amin'ny havoana mahafinaritra ao amin'ny alan'i Jackson-Washington State sy ny alan'i Hoosier National, dia 10 minitra monja avy eo amin'ny I-65.
Mitsambikina haingana fotsiny amin'ny I-65 sy US 31, Crothersville dia trano onenan'ireo Tigra mirehareha sy ny fanao isan-taona Fetibe mena sy fotsy ary manga. Mankalaza ny fitiavan-tanindrazana sy ny sainam-pirenena Amerikana ny fetibe. Tamin'ny 1976 no niseho voalohany izany rehefa nankalaza ny faha-roa taonan'ny Etazonia. Hamacher Hall dia manana anjara toerana ao am-pon'ity vondrom-piarahamonina miroborobo ity. Hetsika fiaraha-monina maro sy teatra fisakafoanana tsindraindray no azo ankafizina ao amin'ity toerana manan-tantara ity. Feno trano fisakafoanana sy fivarotana, ity no mpiara-miombon'antoka atsimo amin'ny fampiantranoana any Jackson County.
Seymour dia mora idirana ao amin'ny Exit 50 amin'ny I-65, US 50, US 31 ary Indiana 11. I Meedy W. Shields sy ny vadiny Eliza P. Shields dia nisoratra anarana tamin'ny tanànan'ny Seymour tamin'ny 27 aprily 1852. Nihombo haingana i Seymour niaraka tamin'ny ny fanampiana ny lalamby Ohio sy Mississippi tamin'ny 1854 ary vetivety dia lasa tanàna lehibe indrindra tao amin'ny County Jackson. Seymour dia manolotra indostria, fiantsenana, trano fandraisam-bahiny, fisakafoanana ary fety sy hetsika lehibe, anisan'izany ny Seymour Oktoberfest, izay manome voninahitra ny lova aleman'i Jackson County. Rock'n Roll Hall of Fame inductee John Mellencamp dia teraka tany Seymour, ary ny mpitsidika dia afaka mizaha mari-toerana marobe manerana ny fiarahamonina. Seymour koa no toerana nisy ny fandrobana fiaran-dalamby voalohany eran'izao tontolo izao nataon'ny Reno Gang malaza any an-toerana. Jereo ny horonantsary iray amin'ny tantara amin'ny fipihana eto. Ny afovoan-tanàna lehibe dia manolotra karazana safidy isan-karazany nefa tsy hahavery izany fahatsapana ao amin'ny tanàna kely izany.
Medora dia ao amin'ny sisiny atsimoandrefan'i Jackson County ary manolotra fomba fijery manaitra sy fahatsapana ny tanàna kely. Atsaharo ny tetezana voarakotra telo lava indrindra any Etazonia, hita eo amin'ny Indiana 235 na jereo ny Medora Brick Plant manan-tantara. Ny Friends of the Medora Covered Bridge dia mikarakara sakafo hariva isan-taona eo amin'ny tetezana, izay traikefa fisakafoanana miavaka eo amin'ny tetezana ankoatra ny lavanty mangina sy fialamboly. Tsindrio eto raha hamaky momba ny sakafo hariva. Medora no ohatra amin'ny fampiantranoana ary izany dia miharihary mandritra ny Medora Mandeha Fetibe mavokely amin'ny Oktobra na ny Fetiben'ny Noely Medora tamin'ny Desambra. Medora dia azo alaina avy any US 50 na Indiana 235.
Vallonia no toeram-ponenana voalohany tany Jackson County ary teo am-piandohana ho kapiteny voalohany tamin'ny fanjakana aza. Vallonia dia any ivelan'ny seza distrika ary azo idirana avy any Indiana 135. Fort Vallonia dia fampahatsiahivana ny tantaran'i Vallonia tamin'ny fiandohan'ny taona 1800 ary velona velona tamin'ny volana oktobra nandritra ny Fetibe Fort Vallonia Days. Ny havoana sy ny knobs dia tazana avy any Vallonia ary tsena fambolena maromaro ary toeram-pamokarana no hita manodidina ny faritra, izay fantatry ny kanto sy watermelon matsiro.
hijery ny tantaran'ny Jackson County
Iray amin'ireo zavatra nahasarika anay indrindra nandritra ny 60 taona mahery ny Brownstown Speedway, hita ao amin'ny Jackson County Fairgrounds. Ny hazakazaka dia mitazona valo volana amin'ny taona amin'ny lalan'ny loto, ary kilasy samy hafa no atolotray. Ireo mpitsidika dia afaka mizaha ny tantaran'ny Jackson County ihany koa amin'ireo tranombakoka enina misy antsika, ao anatin'izany ny Freeman Field Army Airfield Museum sy ny Fort Vallonia Museum. Ireo mpankafy tantara dia afaka manadihady ny anjara asan'ny Jackson County tao amin'ny Underground Railroad, izay nanampy andevo tafavoaka hahatratra ny fahalalahana. Misy ihany koa ireo làlana manan-tantara, tetezana mitafo ary trano fitahirizam-bokatra tian'ireo mpitsidika.
JEREO NY FITSIPIKA
Ankafizin'ny tia kanto
Sehatra zavakanto eo an-toerana
Ny mpankafy zavakanto dia hankafy ny fitsidihana ireo fanangonana zavakanto samihafa an'ny Jackson County. Ny Ivontoerana Indiana ho an'ny Zavakanto, Swope Art Collection, ary Brownstown Fund for the Arts dia samy mandray anjara amin'ny kolontsaina ao amin'io faritra io. Ireo mpitsidika dia afaka manatrika fampisehoana amin'ny iray amin'ireo teatra fiarahamonina misy antsika koa ary mivezivezy amin'ny lalan'ny artisan mba hahitana mpanakanto eo an-toerana bebe kokoa.
JEREO NY SARY ART
fialamboly ivelany amin'ny tsara indrindra
Ho an'ireo mpankafy ety ivelany, Jackson County dia manolotra safidy fialamboly marobe. Ny Muscatatuck National Wildlife Refuge dia manome fotoana mihaza, manjono ary mijery burung. Na any amin'ny ala Jackson-Washington State, ny Starre Hollow State Recreation Area na ny Hoosier National Forest dia afaka misafidy toerana fitobiana sahaza ho an'ny fitsangatsanganana an-trano-avy lavitra ianao. Ny bisikileta, ny dia an-tongotra ary ny mitaingin-tsoavaly dia fomba malaza hitsidihana ireo faritra tsy voakitika ireo, satria manodidina ny hektony ana hetsiny. Ho an'ny mpitsidika fanatanjahan-tena dia manolotra golf tsara ihany koa izahay.